အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး | Page9| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2.4.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
မိမိလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသွင်အပြင်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့များစွာ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အြ...
ဆံကေသာ သန်စွမ်းစေဖို့ လျှိ်ု့ဝှက်ချက်များ
27.3.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆံသားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာလိုပါသလား? ဆံကေသာကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေလိုပါသလား? ကောင်းမွန်တဲ့ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပ...
အမာရွတ်ပျောက်ပြီး အသားအရေကြည်စေတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ဒိန်ချဉ်
7.2.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
အလွန်ပင်ရိုးရှင်းလှတဲ့ အဆိပ်ထုတ်မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးတစ်မျိ်ုးဖြစ်ပြီး အမာရွတ်တွေကို မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်သေ...
6.2.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
မိမိအသားအရည်ကို အစဉ်အမြဲနုပျိုနေစေရန် အောက...
31.1.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေတယ်
ခြောက်သွေ့ပြီးယားယံတဲ့အရေပြားအတွက် သံလွင်ဆီက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။...
အရေပြားအဆီဖုများကို ပျောက်ကင်းစေမည့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
25.1.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
မျက်လုံးပတ်လည်မှာ အဖြူရောင် (သို့) အဝါရောင်အစက်လေးတွေကို milia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအဖုလေးတွေက နှာခေါင်း၊ ပါးပြင်နဲ့ နှဖူး စတဲ့မျက်နှာပေါ်ရှိနေ...